Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSally And Charles
USally And Charles yi-Superhost
Igumbi lethu le-boutique 2 elinegumbi lokuhlala elizimeleyo kunye neyunithi yokutya ilula, iqaqambile kwaye ikhululekile. Inamagumbi okulala ama-2 aneebhedi ezilingana nokumkanikazi, Igumbi lokuhlambela elinebhafu kunye neshawari, ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo, Igumbi lokuphumla elinomlilo weenkuni, iWifi, umabonakude/iDVD, i-air-conditioner ebuyela umva kunye nedekhi yakho ene-BBQ. LE PROPATI AYIKUFANELEKILEYO KUBANTWANA ONGAPHOSWAYO NGENXA YEAMADIDI, AMADAMA AMAKHULU, IZIBONELELO KWAKUNYE NEZITYALO EZIQHELEKILEYO.
Indawo yethu inika iindwendwe zethu indawo yokuphumla kunye nokuphumla. Njengoko sihlala kwiihektare ezi-6, kwaye sinendwendwe enye kuphela ehlala ngexesha, undwendwe ngalunye luqinisekisiwe ngokuyimfihlo, uxolo kunye nethuba lokunxibelelana nendalo kwakhona. Ngelo xesha, sisondele kwii-wineries, iindawo zokutyela ezinkulu kunye neendawo ezinomdla kule ndawo. Singathatha abantu aba-4 kwindawo enkulu yokuhlala. Igumbi lokulala ngalinye linebhedi ekhululekileyo yobukhulu bokumkanikazi, kwaye sinayo ibhedi ekhoyo.
ixabiso lethu $160 ngobusuku nganye yokuqala 2 iindwendwe, ke $35 ngondwendwe extra ubusuku ngabunye.
4.96 ·Izimvo eziyi-261
4.96 out of 5 stars from 261 reviews
4.96 · Izimvo eziyi-261
Zonke iipropathi ezikummandla wethu ziziihektare ezi-5 okanye ngaphezulu, ngoko asinabamelwane abahlala phezu kwethu. Oku kuqinisekisa uxolo kunye noxolo. Zininzi iindawo zewayini kwindawo yethu, kunye nezinye iindawo zokutyela eziphezulu. Sihlala kwi "Foodbowl" yaseNtshona Australia ngoko kukho intabalala yeziqhamo ezitsha, imifuno ekhoyo, kuquka iiavokhado kunye neentlanzi ezifana netrout kunye nemarron. IiTruffles zikhuliswa kufutshane kwaye zihanjiswa kwindawo yokutyela yasekhaya. IBig Brook Dam yindawo engathandekiyo yokutyelela kwaye yimizuzu emi-5 ukusuka kwindawo yethu. I-Gloucester Tree yimizuzu emi-5 yokuqhuba kwakhona. I-Beedelup Falls kunye ne-Karri Valley yimizuzu engama-20 yokuqhuba.
Indawo yakho yokupaka yabucala isecaleni komnyango wakho wangaphambili, kwaye isimahla.
Sinegadi yethu evulekele uluntu izihlandlo ezi-2 okanye ezi-3 ngonyaka kwaye sizame ukugcina isitiya esinomdla nesinemibala unyaka wonke. Igadi yethu ngumsitho ofanelekileyo womtshato kunye nendawo yefoto yomtshato, kwaye siye sabamba imitshato emi-4 ukuza kuthi ga ngoku.
I-Pemberton imalunga neyure ezi-1 1/2 ukusuka eMargaret River, i-1 1/2 yeyure ukusuka eWalpole kunye ne-1 1/2 iiyure ukusuka e-Augusta, ngoko ifanelekile njengendawo engundoqo yepivot kuzo zonke ezi ndawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sally And Charles
Ikhaya lethu likwipropathi, ngoko sikwisiza. Sinezinja ezi-2 zeLabrador ezithanda ukudibana neendwendwe ezintsha nangona kunjalo, ukuba awuzithandi izinja, sinokuzigcina kude.